Kooxaha Elman Iyo Muqdisho City Club oo galabta ku balansan garoonka Eng Yariisow – Gool FM
(Muqdisho) 01 Nof 2019. Kooxaha Elman Fc Iyo Muqdisho City Club ayaa galabta ku balansan garoonka Eng Yariisow Stadium ee dhaca Degmada Cabdicasiis, Ciyaar qeyb ka ah koobka xiisaha badan ee General Daa’uud.
Kulanka ugu taageeryasha Badan ayaa dhici doona galabta waa ciyaarta loogu magac daray Derby Capital ama kulanka Caasimada, labadan kooxood ayaa waxey yihiin kuwa isla xisaabtama marka ay timaado kubadda cagta.
Marka ay timaado ciyaartan waxaa jira xidigo waa weyn oo lagu xasuusto balse hada aan qeyb ka aheyn labada dhinac waxaana kamid ah, Mustaf France, Babaay, Sacad Saalax, C/raxmaan Baladweyne, Yaasiin, Goolhaye Gaatamow,Cabdilaahi Dheere iyo magacyo kale.
Lixdii kulan ee ugu dambeysay ay labadan kooxood isku arkan horyaalka waxaa saddex kamid ah badisay naadiga Muqdisho City Club, sido kale hal kulan oo qura ayey adkaatay kooxda jaalayasha ee Elman, halka labo kulan kale ay ku kala baxeyn bar baro labada dhinac tartamada horyaalka.
Kooxda Muqdisho City Club kulankii ugu dambeyay ay ka dheeshay tartanka General Daa’uud sanadkan waxey 1-0 ku soo qaarijisay kooxda Dekedaha.
Halka sido kale Elman ciyaartii ugu dambeysay ay tartanka General Daa’uud ay bar baro goolal la’aan la soo gashay kooxda Horseed.
Xidiga Lagu Magacaabo Anwar Shakunda ayaa lagu xasuustaa kulankii ugu dambeyay uu ka hor yimaado kooxda Muqdisho City Club inuu labo gool cajiib ah ka dhaliyay ciyaar qeyb ka aheyd horyaalka Somali Premier League sanadkii la soo dhaafay.
Daadir Aamiin ayaa mar kale ka hor imaan doona kooxdiisa hore ee Muqdisho City Club isago markan wata fanaanada jaalayasha ee Elman.
Naadiga Muqdisho City Club waa kooxda difaacaneyso koobkan General Daa’uud iyadoo sanadkii la soo dhaafay ay ka qaaday kooxda cawo iyo maalin ee Horseed.
Elman ayaa raadineyso iney hesho saddexdii dhibcood ee ugu horeyay tartankan halka M,C,C iyadana ay rabto iney hogaanka Group-kan sii dhiireysato oo ay tagto 6-dhibcood.
Kooxaha: Elman Vs Muqdisho City Club